C/casiis Lafta Gareen “Kuraasta dadka qaar ku fadhiyaan waa looga xaq leeyahay” | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta C/casiis Lafta Gareen “Kuraasta dadka qaar ku fadhiyaan waa looga xaq leeyahay”
Madaxweynaha Koofur Galbeed C/casiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen) oo xalay ka qeyb galay kulan casho sharaf ah oo uu Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal u sameeyay Xildhibaannada laga soo doorto Koofur Galbeed, kaasoo ahaa mid is cafin ah oo wixii madmadow siyaasadeed ee ka dhashay meesha looga saarayay.
C/casiis Lafta Gareen ayaa ugu mahadceliyay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal kaalintii uu ka qaatay ansixintii heshiiskii doorashada ee ay wada gaareen Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxda dowlad Goboleedyada.
Madaxweyne Lafta Gareen ayaa sheegay in Koofur Galbeed ay la socoto dhibaatooyinka laga soo maray dowladnimada, isla markaana hannaan cadaalad ah ay u dhici doonto doorashada labada Aqal ee deegaanada Koofur Galbeed.
Mar uu ka hadkayay kuraasta Xildhibaannada ayuu sheegay in kuraasta qaar dadka ku fadhiya looga xaq leeyahay oo ay jiraan dad u dhintay in eheladooda lagu xushmeeyo.
“Kuraastaan qaarkood dadka ku fadhiya waa looga xaq leeyahay, dad baa u dhintay, waa in la qadariyo laguna xushmeeyo ehelkooda, xitaa waxa aan heynaa in kuraasta qaarkood in xaq weyn ku leeyihiin dad nool, nin waliba waa in lagu ixtiraamo waxa uu ahaa” ayuu yiri Madaxweyne Lafta Gareen.
Doorashada Xildhibaannada Koofur Galbeed ayaa ka mid ah kuwo ugu xasaasisan oo si aad ah isha loogu haayo, isla markaana ay jiraan Xildhibaano ka cabsi qaba inay kuraastooda waayaan.
Previous articleSawirro: Madaxweynaha Galmudug oo tababar u soo xiray dufcadii 1aad Ciidanka Daraawiishta
Next articleMaraykanka oo ciidamadooda kala baxaya dalka Soomaaliya